I-Shoemakers Cottage - 2 Church Street
Indawo yam ikufutshane nezinto ezenziwayo ezilungele usapho kunye nezithuthi zikawonke-wonke. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa ye-cosiness, ukukhanya, kunye nebhedi epholileyo. Indawo yam ilungile kwabatshatileyo, abahambi bebodwa, kunye neentsapho (kunye nabantwana).
Kukho indawo enye ephambili yokuhlala ene-Burner yeenkuni, umabonwakude, isofa kunye netafile yokutyela. Ngaphandle koku uya kufumana igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi. Phezulu kwezinyuko igumbi lokulala eliphambili lifunyanwa ngasekunene kwaye ujike ngasekhohlo ukuya kwigumbi lokulala lesibini.
4.68 ·Izimvo eziyi-164
4.68 · Izimvo eziyi-164
IStiffkey yilali entle eseMantla eNorfolk, ephakathi kweWells Next the Sea kunye neBlakeney enokufikelela kwiNational Trust Stiffkey Saltmarshes kunye nendlela enexabiso. Ngaphakathi kwilali (imizuzu emi-2 uhamba usuka kwi-Shoemakers cottage) kukho iiVenkile ze-Stiffkey ezibonelela ngekofu esanda kwenziwa kunye nokhetho oluncinci lwemveliso yasekhaya kunye negrosari. I-Red Lion yindawo yelali (imizuzu emi-5 yokuhamba) kwaye inikezela ngokhetho olukhulu lwee-ales zalapha kunye nokutya kwaselwandle kwasekhaya kunye nokutya kwendabuko.
Mum of two beautiful girls, Loves travel, wine, fashion and food
Mna nomyeni wam siya kufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ngeenombolo zethu zeselfowuni ezithunyelwe kwi-imeyile yethu yokwamkela.